डिभोर्स गर्न तयार शिल्पालाई छविको पत्र, शिल्पा जी गान्धीवादी बन्न तयार छु || सुनौलो नेपाल
सुनौलो नेपाल – केहि समय देखि शिल्पा र छविको सम्बन्धमा आएको दरारका कारण नेपाली सिने नगरी तातेको छ। एक अनलाइनलाई अन्तरवार्ता दिदै नायिका शिल्पा पोखरेलले छबिसंगको सम्बन्धलाई कानुनी रुपमा टुङ्गाउन डिभोर्स फाइल गरेको अन्तरवार्ता दिएकि थिएन।
नायिका पोखरेलले आइतबार नै काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा डिभोर्सको लागी निबेदन दिएको समेत खुल्न आएको छ। उनले श्रीमान छविराज ओझाबाट आफु माथि हिंसा भएको शिल्पाले आरोप शिल्पाले लगाएकी छन् ।
शिल्पाको यो सबै कहानी पत्तो पाएका उनका पति छविले सोमबार राती नै खुला पत्र लेख्दै आफु गान्धी बादी बन्न तयार भएको बताएका छन्। उनले श्रीमती पोखरेललाई टेबुलमा बसेर छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् । हेर्नुहोस यस्तो छ मध्यरातमा शिल्पालाई छविको खुल्ला पत्र
मैले ५२ बर्षको उमेरमा ३ जना श्रीमती सङ सम्बन्ध बिच्छेद भईसकेपछि तपाईं सङ चाहिँ जिन्दगि बिताउन सक्छु होला भनेर जिन्दगिका सब थोक कम्प्रमाइज गरेर माया गरेर बिहे गरेको श्रीमती हो तपाईं छातिमा हात राखेर आज एक्छिनलाई आफैलाई नढाटी सम्झनुस तपाइले लगाएका कति आरोपहरु सत्य छन ? यदि तपाईं पनि आफुलाइ सच्याएर अझै मेरो श्रीमती, तपाइले बिहे गर्ने बेलामा आस्वासन दिलाए जस्तै मेरो बुढेसकालको सहारा बनेर बस्न सक्नुहुन्छ भने म पनि मेरा कमि कमजोरीहरु सच्याएर गान्धीबादी भएर बस्न सक्छु । अरुको कुरा नसुन्नुस, आउनुस हाम्रो घरको ढोका सधै तपाईंको लागि खुल्ला छ । हैन र यदि तपाइ साच्चै म सङ बस्न सक्नु हुन्न भने पनि एक पटक म सङै आएर टेबलमा कुरा गर्नुस । मेरो ईतिहास पल्टाएर हेर्नुस आज सम्म मैले कुनै पनि श्रीमतिलाई अन्यायमा पारेको छैन । तपाइलाइ पनि पार्दिन । मैले बिगत ३ दिन देखि तपाइलाइ सम्पर्क गरेर भेट्न खोज्दा पनि तपाइलाई अब मेरो वकिलले भेट्छ भन्नू भयो । म फेरि पनि भन्दैछु सन्सारको कुनै पनि अदालतमा जानू पर्दैन । छबी ओझाको अदालतमा सिधै आउनुस । तपाइले न्याय पाउनु हुन्छ ।
मङ्ल, असार ३१, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस